Shiinaha iibinta kulul 3-lakab faashad wajiga maaskaro la tuuri karo soosaarayaasha caafimaadka maaskaro iyo shirkado | Caafimaadka AKF
Iibinta kulul 3-lakabka faashadda wejiga maaskaro la tuuri karo ee maaskaro caafimaad
Shayga: Maaskarada qalliinka la tuuri karo
Qaabka: Dhegaha-looxa / Xidhmada 3 lakabka
Waxyaabaha: Lakabka aan duubneyn ee dusha sare + 98% lakabka dhalaalaya + Lakabka gudaha ee aan tolnayn
Xirxirida: 50 pcs halkii sanduuq hadiyadeed; 2000 kumbiyuutar halkii kartoon
La tuuro 3 Mashiinka Wejiga Ply PP Iyadoo leh dhego-dhego
1). Bar sanka la qabsan karo
3). Araajida: Waxaa loo adeegsaday warshad, guri, rug caafimaad, isbitaal, farmashiye, makhaayad, cunto soo saarid, qurxin qurux, warshadaha elektarooniga iwm
Xuubka Filter Tayada: Badeecadani waa aalad caafimaad oo aamin ah.
Dabacsanaan iyo raaxo leh: Maaskarada waxay leedahay qabatooyin dhegta laastik ah oo wanaagsan, oo hagaajin kara dabacsanaanta; ku habboon cabbirka ragga ama dumarka waaweyn
Ilaalin wax ku ool ah: Ka hortag dhibcaha, bakteeriyada, boodhka, qiiqa, dambaska, manka, iwm., Waxay si wax ku ool ah uga hortagaan fayrasyada, oo ku habboon ilaalinta caafimaadka shaqsiyeed
Awoodda neefta wanaagsan: Waxay ka samaysan tahay saddex lakab oo dhar aan tolmo lahayn, jilicsan oo neefsan kara, oo bixinaya difaac wax ku ool ah; xirasho wanaagsan, neefsasho siman
Si ballaaran loo isticmaalo: Kahortag cudurrada waqtiyada xasaasiga ah, oo ku habboon safarka bannaanka, saldhigyada gaadiidka, meelaha dadweynaha, aqoon isweydaarsiyo aan boodh lahayn, adeegyo cunto bixin ah, habeyn cunto
Saddex faashad lakab ah:
Waxay ku habboon tahay isbitaalada, suuqyada laga dukaameysto iyo meelaha kale ee bulshada
* Cadaadiska neefsashada oo hooseysa oo leh hufnaan sifeyn sare.
* 3 ply nonwoven xaqiijin sifeeyo iyo adsorb qadar cayiman oo ah boodh warshadaha waxyeelo leh.
1.Saddex lakab ayaa ilaalinaya: Lakabka aan duubneyn ee dusha sare + 98% lakabka dhalaalaya + maqaarka ku habboon maqaarka gudaha ee aan tolnayn, raaxada neefsashada, iska caabbinta neefsashada oo hooseysa.
2. Caagga sanka caaga balaastigga ah, Qari dhinacyada sanka go'an. Waliba ku habboon dhamaan noocyada wajiga.
3. Suunka dhegta fidsan oo sagxad ah. Dhegaha ma adkayn doono.
Lakabka gudaha: maqaarka-u-saaxiibtinimo Aan-tolmo lahayn, jilicsan oo raaxo leh, wuxuu yareeyaa suurtagalnimada xasaasiyadda maqaarka.
5.Waxaa alxanka Xiinka Xiinka ah
6.Ka hortag dhiig daadashada
Hore: Iibinta kulul Maaskarada caafimaad ee la tuuri karo oo tayo sare leh oo ka timi warshad Shiinaha
Iibinta kulul Maaskaro caafimaad oo la tuuri karo oo leh tayo sare ...